Ìhè Ìhè nke Ọwụwa Anyanwụ Ruo 70W 75W 80W China Manufacturer
Nkọwa:Ìhè Ikpuchi Ighalo 70w,Ìhè Ikpuchi Ugo 75w,Ìhè Ikpuchi Ihu Mmiri 80w
Home > Ngwaahịa > Iju Mmiri Iju Mmiri > 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N&#39;èzí > Ìhè Ìhè nke Ọwụwa Anyanwụ Ruo 70W 75W 80W
Ihe Nlereanya.: BB-FL-70W-E1
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ anyị 70w nwere ike ịmịpụta ọganiihu dị 80000m. Ìhè Igwe ọkụ a nke Ledan 75w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ na ya. Nke a na-enwu n'ichekwa Ìhè 80w nwere eriri igwe na-agbanwe agbanwe, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ịchọrọ. Site na ntulee IP66, enwere ike iji ọkụ na-asọpụta nzigasị mmiri n'èzí na n'ime ụlọ. Nke a butere ọkụ Kuwait zuru oke maka ubi, ụlọ mmepụta ihe, docks, yad, n'ámá egwuregwu, ama egwuregwu na ebe ndị ọzọ ebe achọrọ ọkụ.
Ngwurugwu Ngwurugwu Led Ling Light Knuckle Mount 60W Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ nke 60W 65W Kpọtụrụ ugbu a
Led Wall Flood Light Lightmable 60W 5000K Kpọtụrụ ugbu a
IP65 Led Iju mmiri Ìhè 40W 50W 5000K Kpọtụrụ ugbu a
IP66 Led Ìhè Mmiri 50W 65W 70W Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ikpuchi Ighalo 70w Ìhè Ikpuchi Ugo 75w Ìhè Ikpuchi Ihu Mmiri 80w Ìhè Ikpuchi Ighalo 60w Ìhè Ikpuchi Ihu Uzo 300w Ìhè Ikpuchi Ighalo nke 40 Watt Ìhè Ikpuchi Iri Ego 80 Watt Ìhè Ikpuchi Iri Ego 500 Watt